प्रभावको मूल्य बुझ्दै | Martech Zone
मङ्गलबार, अप्रिल 23, 2013 मङ्गलबार, अप्रिल 23, 2013 Douglas Karr
हालसालै हामीसँग एउटा कम्पनी थियो जसले हामीलाई लगानीकर्ताहरू, उद्योगका मुख्य व्यक्तिहरू, र ग्राहकहरूको लागि उनीहरूको प्लेटफर्म प्रमोट गर्न मद्दत गर्न चाहेका थिए। कम्पनीसँग हाम्रा सेवाहरू प्राप्त गर्न कोषहरू थिएनन् त्यसैले हामीले केही बहिष्करण र कम्पनीको वृद्धि वा बिक्रीबाट आउन सक्ने राजस्व वा नाफाको प्रतिशतको लागि अनुरोध ग .्यौं। यो हुन गइरहेको छैन। तिनीहरूले कल्पना गर्न सक्दैनन् कि हामी हाम्रो पक्षमा यति थोरै प्रयासको लागि यति धेरै माग्दै छौं।
प्रभाव पहुँच गर्दै
हाम्रा प्रयासहरूको लागि कहिल्यै क्षतिपूर्ति नपाउने जोखिमको बाहेक, त्यहाँ एक धेरै ठूलो तस्वीर छ जुन यो सम्भाव्यताले बुझेन। उनीहरूले हामीले यहाँबाट प्राप्त गर्ने प्रयासको लागि भुक्तान गरिरहेका थिएनन्, उनीहरूले हामीले गत २० बर्षदेखि काम गरिरहेका प्रयासको लागि भुक्तानी गरिरहेका थिए। हामीसँग उद्योगमा सब भन्दा राम्रो नेटवर्कहरू छन् किनकि समय र देखभालले प्रमुख सरोकारवालाहरूसँग सम्बन्ध बनाउँदछ। हामीसँग उद्योगमा सब भन्दा राम्रो ब्लगहरू छन् जुन संसाधनहरूको कारण हामीले दिन बितेको दशकौंसम्म लागू गर्यौं। अर्को शब्दहरु मा, हामी हामी के क्षतिपूर्ति बाँधिरहेका छैनौं गर्दै, हामीले यसलाई पहिले नै के गरिरहेछौं सम्पन्न.
हाम्रा दर्शकहरूको पहुँच, हाम्रो विशेषज्ञतामा पहुँच र हाम्रो नेटवर्कमा पहुँच मूल्यवान छ। तर यो मूल्यवान छ किनकी हामीले श्रोता, विशेषज्ञता र हाम्रो सम्पूर्ण क्यारियरको लागि नेटवर्कमा लगानी गरेका छौं। जब हामी एक प्रतिशतको लागि सोध्छौं जुन छ आंकडामा पुग्न सक्छ, तिनीहरू पहुँचको लागि सोधिरहेका छन् जुन हामीले लाखौं डलरमा लगानी गरेका छौं।
कम्पनीहरूले जहिले पनि आफैंलाई समेट्छ ... विशेष गरी अनलाइन। कुनै अनुप्रयोगको साथ कसैलाई सोध्नुहोस् र उनीहरूले तपाईंलाई अरबौं डलरको उद्योगको बारेमा र उनीहरूको उत्पादनको लागि दशौं वा सयौं लाखौं डलरको अवसरको बारेमा बताउनेछन्। यदि उनीहरूले उनीहरूको सय करोड डलर कम्पनीको%% दिए भने त्यो $ $ मिलियन हो! हामी कसरी $ मिलियन पाउनेछौं?
समस्या यो हो कि तिनीहरू एक सय मिलियन डलरको कम्पनी होइनन्। वास्तवमा अधिकांश कम्पनीहरू पूर्ण रूपमा असफल हुन्छन्। एक सफल ग्राहक आधार बिना, उद्योग मा राम्रो विपणन भैरहेको छ, र लगानीको पहुँच को लागी, तिनीहरू worth0लाई मूल्यवान् छन् ... उनीहरूले तिथि गरेको लगानीको पर्वाह नगरी। र ० को%% ० ० हो। तिनीहरू हाम्रो सहयोग बिना $ ० लायक छन् ... तर हाम्रो सहयोगको साथ उनीहरूसँग धेरै बढी हुने सम्भावना छ।
जब प्रतिशतको कुनै ग्यारेन्टी प्रदान गर्न सकिँदैन, हामी प्रॉस्पेक्टबाट टाढा हिंड्नुपर्‍यो। हामीले तिनीहरूलाई पहिले नै हाम्रो नेटवर्क भित्र एक प्रमुख प्रभावकर्तासँग परिचय गराइसकेका छौं जसले द्रुत बृद्धि वा लगानी निम्त्याउन सक्छ। उनीहरूले सोचे कि प्रयास कम थियो ... केवल एक ईमेल जसले ब्लग पोष्टमा समावेश गर्न निम्त्यायो। उनीहरूले यो तथ्यलाई महत्त्व दिदैनन् कि ईमेलले आउन धेरै बर्ष लाग्यो र किन उनीहरूको उल्लेख गरिएको कारणले प्रभावकर्ताले हाम्रो आदर गरेको थियो। यो बिन्दुमा पुग्न हामीले धेरै काम लियो। यो दुर्भाग्य हो कि उनीहरूले त्यो मूल्य बुझ्दैनन्।
एक कम्पनी को%% लाई एक प्रभावकर्तामा लगानी गर्ने जो लाखौं डलर चलाउन सक्छ एउटा सानो लगानी गर्नु हो। कम्पनी लाखौं संग टाढा हिंड्न सक्छ र, हो, हामी एक स्वस्थ राशि संग दूर हिंड्न सक्छ। तर कम्पनीले ती लाखौंलाई कहिले पनि प्राप्त गर्ने थिएन यदि यो हाम्रा संसाधनहरू (ज्ञान, नेटवर्क, दर्शक) को उपयोग नगरेको भए।
म कसैलाई यो भन्दा फरक देखिन जो एक पुस्तक लेख्न वर्ष बित्यो र यसलाई बेच्न को लागी। तिनीहरू प्रकाशकमा जान्छन्। त्यो प्रकाशकसँग मार्केटिंग, वितरण, र प्रकाशन क्षमताहरू छन्। राजस्वको बहुमतको बदलामा, तिनीहरूले लेखकसँग व्यापार गर्छन्। प्रकाशकले कहिल्यै डलर कमाउने जोखिम राख्दैन, तर यसले धेरै बनाउन पनि सक्दछ। लेखकले कहिल्यै प्रतिलिपि बेच्ने जोखिम लिदैन, जबसम्म तिनीहरूले प्रकाशकको ​​संसाधनहरूमा पहुँच प्राप्त गर्दैनन्।
यो एक व्यवसाय सम्बन्ध हो जुन धेरै उद्योगहरूमा काम गर्दछ र यो व्यवसाय सम्बन्ध हो जुन टेक्नोलोजीसँग काम गर्दछ।
Ins इनसाइट्स सामाजिक डाटा तपाईंको व्यवसायको लागि प्रकट गर्न सक्दछ
अप्रिल 23, 2013 मा 10: 14 एएम
प्रभाव विशेषज्ञता जस्तै छ। यसले लागू गर्न एक मिनेट मात्र लिन सक्दछ, तर यो प्राप्त गर्न को लागी एक जीवनभर लिन्छ।
यसका साथै तपाईसँग जति छ त्यति सजिलो छ कि प्रयोग नगर्नेहरूको दृष्टिकोणबाट व्यायाम गर्न सकिन्छ।
तपाईसँग नभएको जेसुकै कुरालाई कम मूल्या .्कन गर्न यो सजिलो छ। यो अनुमान गर्न विशेष गरी सजिलो छ जुन तपाईं तुरुन्तै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न जुनसुकै पैसा खर्च गरे पनि।
अप्रिल 23, 2013 मा 11: 34 एएम
यो धेरै स्तरहरूमा त्यस्तो उत्कृष्ट पोष्ट हो ...।
सबैभन्दा पहिले, प्रत्येक एजेन्सी र परामर्शदाताले यसलाई राम्रोसँग बुझ्न र उनीहरूले पाएको मूल्यलाई मूल्यवान गर्न पढ्न आवश्यक छ। तिनीहरू यसको लागि अझ धनी हुनेछन्।
दोस्रो, प्रत्येक शुरुवातले प्रभावको पागलपन शक्तिलाई बुझ्न र तिनीहरूको प्रक्षेपणलाई कैटपलेट गर्न वा उनीहरूको बृद्धिलाई झुकाउनको लागि समर्थनहरू बुझ्नु पर्छ।
२० बर्ष पहिले मैले एउटा प्रख्यात मार्केटिंग परामर्शदातासँग काम गरेर इन्जिनियरि joint संयुक्त उद्यम बाहेक केही गरेन। ती मध्येका केवल एक उद्यमले उनलाई एक हप्तामा in 20 मिलियन ल्यायो।
महान रिमाइन्डरको लागि पुन: धन्यवाद कि प्रभाव = लाभ। यसलाई सदुपयोग गर्नुहोस्।